‘Pogba waxa uu ahaa wiilka gegida ugu wanaagsan,’ Carragher. – Gool FM
‘Pogba waxa uu ahaa wiilka gegida ugu wanaagsan,’ Carragher.
Kaafi August 20, 2016
(Manchester) 20 Agoosto 2016. Daaficii hore ee Liverpool Jamie Carragher ayaa xusay Paul Pogba oo bandhig la yaab leh xalay soo bandhigay kaddib markiii Old Trafford kol kale ka soo muuqday.
Pogba waxa uu United ugu soo laabtay aduun dhan 89m oo Pound waana rikoorka ugu qaalisan ee ciyaaryahan kubadda cagta ebid laga bixiyo, balse xalay waxa uu dhammeeystay 90-ka daqiiqo kulankii ay 2-0 ku garaaceen Southampton.
Carragher waxa uu yiri: “Waxa uu ahaa wiilkii ugu fiicnaa garoonka.”
“Pogba gegid oo dhan ayuu joogay. Waxa uu ahaa khadadkii dhexe ee hore, cawska oo dhan wuu joogay. Waxa ay ahayd sida in aad daawaneyso wiilka ugu fiican garoonka. Mararka qaar taas weyn xanuujin kartaa Man United, laakiin tayada uu leyaay iyo kartidiisa waxa ay I xasuusineysaa lambarka 10-naad. Shaki ma leh hibadiisa in la soo bandhigay,” ayuu Carragher u sheegay Sky Sports News.
Imisa ayey Manchester City ku bixin doontaa Joe Hart?
Ronaldo-kii asalka ahaa oo soo xushay 11-kiisa riyada...Tolow SAMIGII ma ku jiraa? [Daawo]